Maxkamadda Ciidamadda Soomaaliya oo dil toogasho ah ku xukuntay sargaal dilay taliye ku xigeenkii ciidanka badda - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMaxkamadda Ciidamadda Soomaaliya oo dil toogasho ah ku xukuntay sargaal dilay taliye ku xigeenkii ciidanka badda
February 20, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Cabdinaasir Xoosh oo katirsan ciidanka badda ayaa Muqdisho ku dilay taliye ku xigeenkii ciidanka badda Siciid Mariino.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Maxkamadda Ciidamadda Soomaaliya ayaa dil toogasho ah ku xukuntay Cabdinaasir Xoosh oo dilay taliye ku xigeenkii ciidanka badda Soomaaliya, sida uu sheegay guddoomiyaha Maxkamadda Darajada Kowaad ee Ciidamadda Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute.
Maxkamadda ayaa sidoo kale darajo ka qaadis ku sameysay Cabdinaasir Xoosh oo ah sargaal katirsan ciidanka badda.
Cabdinaasir Xoosh ayaa taliye ku xigeenkii ciidanka badda Soomaaliya Siciid Aadan Yuusuf oo loo yaqiin “Saciid Mariino” ku dilay gudaha dekada Muqdisho bishii lasoo dhaafay ee Janaayo.
May 23, 2018 Niman hubeysan oo xildhibaan katirsan Puntland ku dilay magaalada Gaalkacyo
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wasaaradda Caafimaadka Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay 36 kiis oo cusub oo coronavirus ah la helay 24-kii saac ee la soo dhaafay. 27 kamid ah dadka laga helay xanuunka ayaa ah rag halka [...]